Iri-mahory… | NewsMada
« Iri-mahory, ohatra ny zaza maditra ». Entina hilazana zavatra notadiavina mafy ho azo, nefa nony azo mampitondra fahoriana ity ohabolana ity. Tsy dia ny zaza loatra anefa no tiana asian-dresaka eto, fa ny momba ny toetr’andro. Any amin’ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’ny Nosy any izao, nanomboka omaly ary mety haharitra telo andro, miloko mena, izany hoe, filazana loza mitatao, ny momba ny rotsak’orana. Ho be dia be izany. Ny faritra atsimo izay nikaikaika noho ny haitany namely mafy dia mafy, ary izao hiaran’ny rehetra mahita izao ny vokany : kere. Izao anefa, voalaza araka ny vinavina fa mety hamely mafy ny rotsak’orana, ary mety hiteraka zava-doza indray ny vokany.
Iri-mahory. Ny nataontsika olombelona ihany re no mahatonga izany e. Izao vao miseho ny voka-dratsin’ny tsy firaharahiana, ny tsy fikajiana ny tontolo iainana. Aiza ho aiza izaon, raha tsy hiteny afa tsy izay, ny amin’ilay hoe fandrarana ny fampiasana harona plastika ? Miredareda ohatra ny afo-mololo ihany, kanefa vetivety dia nangina ny fampiharana ny lalàna, dia izao… Anisan’ny voka-dratsin’izany izao mitranga izao, ka tokony samy hieritreritra.
Eny, fa na amin’ny fanaovana politika, amin’ny fitantanana… koa aza, misy ny « iri-mahory ». Iza no tsy mba nikatsaka, nitady, na naniry olona, olom-boafidy, hitondra fampandrosoana ho an’ny mpiara-belona aminy, ho an’ny firenena ? Betsaka, mba tsy hilazana hoe izy rehetra anefa no « iri-mahory ». Notadiavina sy nirina mafy, kanjo nony azo… mampitondra fahoriana. Mbola ny nataontsika olom-pirenena, vahoaka mpifidy ihany koa no mahatonga izany. Dia ireny, na izao no vokany !